EU UMKHIQIZO FLAT STEEL PRICE ROUNDUP KUSUKELA MEPS - China Ningbo Ke Ming Imishini
isisekelo amanani German rose, ngeNgci / NgeNyoni, ngenxa imikhawulo nenani into etholakala esusela abakhiqizi European naphesheya kwezilwandle. Ngokusho uhlelo lwamuva lwe-MEPS European Steel ukubuyekeza, ukuthengisela ihlala kuvinjelwe, ikakhulukazi imikhiqizo camera, ne izikhathi ukulethwa phambili out kwemnyaka nangale. Sesevisi amasheya ukunciphisa ngokushesha eziningi abasebenzisi bokugcina, ngokuvamile ababengaba ukubeka ibhizinisi ngqo esigayweni, athenga abasabalalisi ukuze ufinyelele steel ngokushesha.
Italian zosizo igxile ukubika ukunikezela yobunzima. Nokho, imingcele yabo lingaqhubeka isibambo. Ngokuba mzuzu, amakhasimende bayanqikaza ukhokhe ngaphezulu. Umkhakha ukusatshalaliswa has umthamo kakhulu futhi eziningi stockists Namanje ukuthengisa ngempela ngobudlova.
E-UK, iningi strip isigayo umkhiqizo amanani isihambile, kule nyanga, njengoba abakhiqizi yezwekazi European waphakamisa isisekelo amanani offset buthaka okokuphrinta. manje Suppliers okhuluma i kuyanda ezengeziwe. abasabalalisi Iningi isicelo ukwanda esigayweni, ngakho eziseceleni ziyamukeleka. Izitoke ziphansi ngenxa supply ukushoda. Sithola ukutholakala kancane kubahwebi.
abathengi Belgian wawuthi push for amanani aphakeme akuvezi iyiphi nokwanda okufanayo ngokufunwa, nakuba sesevisi ukuthengisa ekahle. Mill oda izincwadi, ngoba iningi imikhiqizo strip esigayweni, zigcwele kuya kuDisemba, noma ngisho nangale. Ubuningi ayokhawula kakhulu futhi kukhona ukubambezeleka on kwezidingo eside kakade izikhathi phambili. Distributors ukubika ukuthi amanani isigayo ephakeme ayikwazi isetshenziswa kabusha amanani kuzo zonke izimo.
Ukuntuleka beqonda ukutholakala kwaholela izinombolo ephakeme isisekelo eSpain. Izikhungo izikhungo ukhathazekile ngokuthi amakhasimende abo ngeke kancane ukwamukela kuphela kuyanda esigayweni. Abanye abathengi ukulindela ukuba nezindaba ukunikezela ngokuqeda ngekota yokuqala 2017 Not Okungenani, ngoba ukungena ngokuncintisana-ontengo yakhe yayinqunyiwe kukhona ikhona kusukela imithombo eminingana ezweni lesithathu, azithintwa antidumping izinyathelo.